Posted by ညီလင်းသစ် au 1.3.14
ကိုညီလင်းသစ်ရဲ့ ခရီးသွားပို့(စ်)တွေ ဖတ်ရပြန်အုန်းတော့မည်။ :) :) :-)
ဓါတ်ပုံအက်ဆေးကို လှပသေသပ် သိမ်မွေ့ညင်သာစွာ ရေးလေ့ရှိတဲ့ ကိုညီလင်းသစ်ရဲ့ ခရီးသွားပို့စ်လေး အသက်ဝင်လာအုန်းမှာမို့..စောင့်မျှော်လျှက်ပါ..
ခု ကွန်မန့်လေးချန်ရစ်ခဲ့ပါတယ် အကို ညီလင်းသစ် :)
အယ် ကိုညီလင်းသစ် စလုံးကို လာဦးမယ်ပေါ့၊ ဝမ်းသာလိုက်တာ….။ တွေ့ကြဦးမယ်လေ နော်။ လူတွေက တစ်နှစ်စာအိုမင်းသွားပြီ ကိုညီလင်းသစ်ရေ….။ ခင်မင်ဖော်ရွေမှုတွေကတော့ အရင်အတိုင်းရှိနေမှာပါ။ မချစ်နဲ့အတူ ကျန်တဲ့ကျွန်းသားမောင်နှမတွေက နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုနေပါတယ်ရှင့်။ (တကယ်လည်း ခုတစ်လော စလုံးမှာ အတော်ပူနေတာ)
ရက်တွေညောင်းပြီး လတွေပြောင်းလို့ တစ်နှစ်တာ အိုမင်းသွားပေမယ့် စာဖတ် စာရေး မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ ချစ်ခင်နွေးထွေးမှုတွေကတော့ ဘယ်တော့မှ အိုမင်းရင့်ရော်သွားမယ်မထင်ဘူး မောင်ညီလင်းရေ..
ဧပြီလလောက်သာ သွားဖြစ်ရင် တီတင့်မှာ..မောင်ညီလင်းတို့ မိသားစုကို ကျွန်းလေးမှာ ဆုံနိုင်ခွင့် မျှော်လင့်ချက်ရောင်ခြည်လေးရှိနေတယ်...
အသစ်သော ပျော်ရွှင်မှုတွေ ရပါစေ အစ်ကိုး)
စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ ကျကျနန ရေးတတ်တဲ့ ကိုညီလင်းသစ်ရဲ့ ခရီးသွားပို့စ်တွေ ဖတ်ခွင့်ရဦးမယ်ဆိုတဲ့ သဘောပဲဗျို့...ခရီးသွားစာပေကို ရသပါအောင် ရေးနိုင်တာကို လေးစားရင်းစွဲရှိတာကြောင့် စောင့်မျှော်လျက်ပါဗျား...
ဟုတ်.. ခရီးက သွားမှာ သေချာပေမယ့် ဘာတွေ၊ ဘယ်လောက် ရေးဖြစ်မလဲတော့ မသေချာသေးဘူးဗျ..၊း))
ကျနော်လည်း ရေးနိုင်မယ်လို့တော့ မျှော်လင့်တာ ပါပဲဗျာ၊ ခုလို ကွန်မန့်လေး ချန်ခဲ့လို့လည်း ကျေးဇူးပါနော်…၊
ဟုတ်ကဲ့ အစ်မ…၊ အခါအခွင့် သင့်တော့လည်း လာရဦးမှာ ပေါ့လေ..၊း) ကျွန်းသားတွေက နွေးထွေးစွာ ကြိုနေမယ် ဆိုလို့လည်း ဝမ်းသာရပါသဗျာ..၊ ဆုံကြမယ်နော်…၊း)
ဟုတ်ပါတယ်လေ..၊ တစ်နှစ်လောက် ပြောင်းသွားရုံနဲ့တော့ ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေရဲ့ ခင်မင်မှုက ပြောင်းလဲသွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး၊ ကျနော် ဧပြီလဆန်းအထိ ခြင်္သေ့ကျွန်းမှာ ရှိနေဖြစ်မယ် တီတင့်ရဲ့…၊ ထပ်ဆုံခွင့်ရရင်တော့ အမိုက်ပဲ…၊း))
ကျေးဇူးပါ ညီရေ…၊ မတွေ့တာကြာပြီ၊ နေကောင်းတယ်ဟုတ်?း)
ခရီးက သွားမှာတော့ သေချာပါရဲ့…၊ အဲဒီခရီး အကြောင်းကို ပြန်ရေးဖို့ မုဒ်ဘယ်လောက် ဝင်မလဲလို့ မသေချာတာလေး တစ်ခုပါပဲဗျာ…။း))
ရို်က်ချက်ပြင်းတဲ့ ဓာတ်ပုံလှလှလေးတွေ မြင်ရတော့မည်...:P
I am sure you'll haveagreat time over there again! Wish you have an another beautiful trip on lion island. :)
This time, please see the Padauk tree from orchard. :)
တစ်နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်ကခဏလေးပဲနော် မနှစ်က အစ်ကိုရေးတဲ့ စလုံးခရီးသွားပို့စ်တွေပုံတွေကိုကြည့်ခဲ့ဖတ်ခဲ့တာဖြင့် မနေ့တနေ့ကလိုပဲ...။
ညီမ,ပြောမှ ကင်မရာကို ဖုန်သုတ်ဖို့ သတိရသွားပြီ…၊း)
အဆင်ပြေသလို ရေးပါ့မယ် ညီမရေ…၊
Lil Sis Zun…
Thanks sis! Hope I'll have fun, too. :)
Ha ha ha.. you're right. :D I'll try not to forget to do so this time. Thanks for your reminder! :)
ဟုတ်တယ်ဗျာ..၊ အချိန်ကုန် မြန်ချက်တော့ ကျနော့်စိတ်ထဲ မနှစ်တုန်းက စလုံးကို ယူသွားခဲ့တဲ့ သေတ္တာတောင်မှ အကုန်မထုတ်ရသေးဘူး လားလို့..။းD
လေကြောင်းလိုင်းတွေ လက်မှတ်ခဈေးများများချပါစေ... ဒါမှ ကိုညီတစ်ယောက် ခရီးတွေသွား.. ကျွန်မတို့လဲ ခရီးသွားဆောင်းပါး ကောင်းကောင်းလေးတွေကို ရိုက်ချက်လှလှလေးတွေနဲ့ ဖတ်ရမှာ...။ ဘယပဲဖြစ်ဖြစ် သတင်းလှမ်းပေးတဲ့၊ ခရီးသွားခွင့်ပေးတဲ့ မအိမ်သူရဲ့ ကျေးဇူးကိုတော့ ထိုက်ထိုက်တန်တန် ပြန်ဆပ်လိုက်ပါနော်..:)
ခုချိန်လာပါ သင့်အားမီးခိုးများက စောင့်ကြိုလျှက်ပါး))))